Abukar Arman: Yemen iyo Siyaasadda Ismiidaaminta ee Sacuudiga iyo Aamusnaanta Culimada Islaanka – Radio Daljir
Seteembar 15, 2017 8:14 g 0
Qoraalka Abukar Arman wuxuu markii hore ku qornaa afka Ingiriiska, wuxuuna ku soo baxay bogga The Globe Post (hoos arag). Bahda Radio Daljir ayaa tarjuntay.
Qarnigan kow-iyo-labaatanaad markii la rabo in dowladaha danyarta ah laga “xorreeyo” kaligitalisnimo, iskudhac qabiil, diin, ama mid qowmiyadeed, iyo waliba argagixiso waxaa caado noqotay qaabka kala rogga oo dalkaas loo rogo dab-naareed oo olalaya. Sacuudi Carabiya oo qaabkaas dilaaga ah ka cabbirqaadanaysa waxay abuurtay isbahaysi ay huggaamiso kaas oo biloowgii sannadkii 2015 bilaabay olole milateri si ay u caawiso in “Yemen laga badbaadiyo xukun Shiico” ama Iran.
Hadda oo la galay sannadkii saddexaad, dagaalkii Yemen waa sii xumaaday, dhammaad dhowna ma muuqdo. Waxba waxbay ka daran yihiin e, xaaladda Yemen inta ay sii xumaatay, oo khasaaruhu sii batay, oo dadkii halaagmay, baa hadda waxaa la gaaray heer xannibaadda Yuhuuddu ku hayso Qasa iyo Falastiin loo arko mid aan dhib badan lahayn, waa marka lagu miisaamo tan maanta Yemen ka taagan.
Yaaba yaabkiis e, khasaaraha intaas le’eg ee Sacuudigu gaystay waxaa garab la ah oo Sacuudiga la safan dalka Yuhuudda. Saas oo ay tahay, hadana siyaasadda Yuhuudda waa ka duwantahay tan Maraykanka iyo Ingiriiska, oo Yuhuuddu waxay wax ka eegaysaa xagasha kahortagga Iran, waana sir wadashaqayn oo aan laga warqabin; hadana si looga war hayo.
Haddii si kale loo yiraahdo, Boqortooyada Sacuudigu waxay “cabtay kool-aid (biyo dhadhan mirood sonkoraysan leh)” ee ahaa Yemen ha laga gaaro oo Iran ha laga hortago inta aysan gobolka oo dhan la wareegin. Shaki-baqdineedkan abuurmay ee aan loo meeldayin waxa uu sababay in Boqortooyadu ay soo iibsato hub culus, oo hadana Boqortooyadu ay cadaadis aan horay loo arag ku soo rogto Shiicada Sacuudiga ee laga tirada badanyahay. Arrimahaas xiriirsan ee kor ku xusan waa kuwo marka la isku soo duubo sababaya in lagu hoogto ama keeni kara waxa aan ugu magacdaray kan-ugu-xoogbadan-ha-sii-noolaado (junglification).
Yemeniyiintu waa dad qabiili ah sida Soomaalida iyo Liibiya, sidaas darteed waa dal uu ajnabigu ammurihiisa qarka ka sii tuuray. Malayshiyaad ay lacageeyeen ajaaniibtu ayaa hadda Yemen meel kasta ka soo butaacaya oo carrada wada dhooban.
Tan kale, xannibaada la saaray dhulka Xuutiyiintu ay xukumaan waxaa ka dhashay dhibaatooyin aan loo meeldayin. Boqolkiiba 60 dadka Yemeniyiintu “ma yaqaaniin meesha raashin maanta ama berri ay ka helayaan.” Xaqiiqdaan naxdinta leh waxaa shaaciyey Hay’adda Cuntada Adduunka (WFP), UNICEF, iyo Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO). Haba sheegin daacuunka, nafoqo-darrada, iyo daawo la’aanta.
Waxaas oo dhib ah oo aan kor ku soo taxay, duqaynta diyaaraduha weli waa joogto, waana xad-dhaaf aan loo meeldayin. Weerarada lala beegsado shacabka, isbitaalada, xaafadaha, ayana waa kuwo sababay in hay’adaha xuquuqul isnaanka sida Human Rights Watch (HRW) ay Sacuudiga ku eedeeyaan naxariis-darro tii ugu xumayd gaartayna heerka dambiyada lidka ku ah bini-aadam-nimada.
Gacan-ku-haynta iyo xafidka dhulka baraysan – siiba waqtiga xajka – waa caalamad muujinaysa shaqada ay Boqortooyadu u hayso Muslinka adduunka. Soodhaweynta, isxilqaanka, iyo shaqo-hufnaanta dadka loo igmaday shaqada xajka waa mid aan la hilmaami karin oo maanka xujeyda aan meelna uga bixin, waligeedna ka guuxda. Saas oo ay tahay, oo hadana ay ammaan mudan yihiin, laakiin hadana sharafta labada masjid iyo waliba saanta xajku midkoodna uma dhigmo qiimaha iyo sharafta nolosha hal qof.
Quraanku waxa uu na barayaa in hal qof oo si qalad ah loo dilo ay u dhiganto ama lamid tahay ciribtirka nolosha ummad-Eebbe oo dhan; in la badbaadiyo nolosha hal qof ayana waxa ay u dhigantaa badbaadinta ummad-Eebe oo dhan. Hadaba meeqa shacab ah baa la dilay? Meeqa isbitaal, iskool, huteel baa si aan loo meeldayin, waaba haddii aysan kutalagal ahayn e, baa la beegsaday oo la dumiyey?
Khiyaanada Culimada Muslinka
Dhibka ugu weyn oo maanta haysta ummadda Muslinka (Ummah) – dowladaheeda, bulshadeeda, iyo qof ahaanba – xataa ka daran huggaan fiican, waa la’aanta culimo diimeed leh maskax madaxbannaan, oo hadana diyaar u ah in ay la xisaabtamaan huggaanka siyaasadda, runtana u sheegaan markii runtu lagamamaarmaan ay tahay in la sheego oo meel kale oo foodda la saaraa aysan jirin. Arrinkaas run-sheeggu waa kan Nabi Maxamed uu ku timaamay Jihaad kan ugu roon.
Sidaas darteed, huggaankii siyaasaddu waxay dhiirigelin saa’id ah ka heleen aamusnaanta kuwii la filayey in ay intaas dhaamaan, oo huggaan-ku-sheegii waxa ay si ula kac ah falkeeda u galeen in ay noqdaan kaligitalis aan hadal laga daba yeerin, oo haddii la isku dayo in la saxana aan sax yeelayn oo layn, cadaadis iyo caburin ay la beegsadaan dadkoodii ay xukumeen, illaa laga gaaro heer shacabku ay bilaabaan kacdoon, kacdoonaas oo ay khasab ku tahay in ay la kaashadaan cid kasta oo ay gacan ka heli karaan, xataa cadowga dalka.
Yaabku haba kala darnaado e, laakiin kan ugu xanuun badan baa ah kan: Midkoodna Iimaamyada Al-Xaramayn – waa labada masjid ee barakaysan ee Maka iyo Madiina, ma aysan sheegim oo ma aysan shaacin wax dareen ah oo ku saabsan duqeynta aan loo meeldayin ee lala beegsaday Yemen, iskaba daa in ay toosiyaan ama wax u sheegaan Boqor Salmaan e ama wiilkiisa dhaxalka boqortooyada loo igmay, ahna Wasiirka Difaaca. Midkoodna, hade waa midkoodna labada Iimaan, kama uu horimaan cadaadiska iyo caburinta lala beegsaday walaalahooda Shiicada Sacuudiga. Labada Iimaan ee masaajidada Maka iyo Madiina lama mid aha culimada kale ee Islaanka, maxaa yeelay waa kuwo adduunka oo dhan la taabacsanyahay, loo bogay sida ay Quraanka u akhriyaan, tilmaan ahaanna waa huggaanka Ummadda Muslinka.
Allow Alle, adoon hadana yaabin, ogoow labadaan Iimaan waxaa lagu magacaabay digreeto boqortooyo oo ka timid Masuulka Labada Masjid ee Barakaysan – waa Boqorka laftigiisa. Sharafta darajada booska iyo mushaarka la socda kaliya ma aha e labada Iimaan waxaa loogu abaalguday oo hadana lagu sharfaa bulshada iyo culimada diinta dhexdooda. Sidaas darteed la yaab ma leh haddii labada Iimaan ay marka koowaad daacad u yihiin boqorka iyo awooddiisa, wixii kalena waa darajada labaad iyo ka hoos. Arrinkaan in culimadu hoostimaado boqorka waa mid aan beegsan qaabkii Rasuulka, waana mid khiyaali ah. Boqor, madaxweyne ama huggaamiye in uusan qaldami karin waa mid ka baxsan mabaadiida Islaanka.
In huggaanka bulsho la su’aalo siyaasadda iyo istaraatajiyada uu damacsanyahay, siiba waqtiyada dagaalka, waa waajib saaran qofka Islaanka ah. Xataa Nabi Maxamed waa la weydiiyey sababta iyo siyaasadda ka danbaysay go’aan dagaal oo uu qaatay, waxaana weydiiyey sarkaal la socday oo dhanka dagaalka kaga khibrad roonaa. Qarniyadii danbe, dhaqankaas quruxda badnaa ee watay fikirkaas saliimka ah, Rasuulkuna uu gubaabiyey, culumaduna taageertay, ahaana in aan Boqorka mushaar loo doonan waa maaraystay (daxalaystay), waana sii dhammaanayaa.
Maanta, Muslinka waa ku yar yihiin culimo la jaanqaadi kadha adduunkaan dhakhsaha isku badalaya, dhan bulsho, mid siyaasadeed, dhan dhaqaale iyo mid diimeedba.
Aan Yemen u soo laabto e, waxaan odorasayaa in ay abuuranto labo Yemen oo ku kala yaal xuduudihii Waqooyiga iyo Koonfurta Yemen. Waa qaab dhismeedkii Soomaaliya oo kale iyo “qaybaha qabiil u sii qaybi.” Qayb kasta, ama qabiil kasta goofkiisa, waxa uu bilaabayaa in uu u dhaqmo sidii dowlad madaxbannaan oo kale oo awooda in uu ammuraheeda ku filnaado, laakiin xaqiiqadu tahay istaraatajiyadddii ammaanka oo u gacan gasha calooshooda-u-shaqaystayaal caalamka.
Adoon meel fog wax ka eegin, Blackwater iyo kambaniyadeedii oo wada wata calanka ciidamada Imaaraadka ayaa hadda xukuma Cadan. Waa dowladda rasmiga ah ee maanta oo xataa waa in Madaxweyne Cabdrabbuh Mansuur Xaadi uu amorkooda qaato.
Qoraalka oo dhammaystiran kuna qoran afka Ingiriiska hoos riix.